गजलको सैद्धान्तिक परिचय: गजलका तत्वको संक्षिप्त अध्ययन | साहित्य संसार
★ केशु बिरही★
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुन २०, २०६९
लेखक : केशु बिरही
विधा/श्रेणी : निबन्ध
प्रकाशन मिति : आइतबार, फाल्गुन २०, २०६९
केशु बिरहीका अरु रचनाहरु
अंग्रेजी भाषामा Gazlee शब्द छ । Oxford dictonary ले Gazlee को अर्थ Small antilope वताएको छ । Small antilope को अर्थ an animal resembilngadeer हुन्छ । अर्थात हरिणको सानो वच्चा वा शावक ।
अंग्रेजी भाषाको Gazlee शव्द र यही शव्दको अर्थलाई हेरेर नै समालोचक देबी पन्थीले हरिणको वच्चा -शावक)ले शिकारीको तीरबाट घायल वनेर एक्कासी निकालेको आवाज नै गजलको रुप हो र पछि त्यही ‘गजला’ शव्द अपभ्रंश भएर गजल भएको हुन सक्छ भन्ने आफ्नो धारणा गजल सिद्धान्त र समालोचना नामक पुस्तकमा अघि सारेका हुन सक्छन ।
– डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’
– देवी पन्थी
अर्थात समग्रमा भन्दा गजल शेरमा अनुवन्धित हुने साहित्यिक रचना हो । शेर अरबी भाषाबाट आएको शव्द हो । यो अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । यसको शाव्दिक अर्थ ‘केश’ हुन्छ । केशलाई सौन्दर्य वा प्रेमको प्रतिक पनि मानिन्छ । ‘शेर’ दुईओटा हरफ वा लाईनबाट निर्माण भएको हुन्छ ।
केही उदाहरण हेरौः –
गजलका प्रत्येक दुई पङ्क्तिलाई मिसरा भनिन्छ । अर्थात दुई मिसरा मिलेर एउटा शेरको निर्माण भएको हुन्छ । शेरको पहिलो पङ्क्तिलाई ‘मिसरा ए उला’ र दोश्रोलाई ‘मिसरा ए सानी’ भनिन्छ । ‘मिसरा ए उला’ र ‘मिसरा ए सानी’को सम्वन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रति हुन्छ । यी एक आपसमा असंवन्धित भएमा असंवन्धता दोश हुने कुरा डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ले आफनो पछिल्लो कृति गजल मिमांसा र सौन्दर्यमा उल्लेख गरेका छन । ‘मिसरा ए उला’ ले उठाएको जिज्ञासा वा कौतुहलतालाई ‘मिसरा ए सानी’ टुङ्ग्याउने नै गजलको विषेशता हो । कहिलेकही ‘मिसरा ए सानी’ ले उठाएको जिज्ञासा वा कौतुहलतालाई ‘मिसरा ए उला’ ले पनि समाधान गर्न सक्छ । यी दुवै एक आपसका अन्योन्याश्रति पङ्क्तिबाटै शेरको पूर्ण भाव अभिव्यक्त भएको हुन्छ ।
मतला वा मत्ला भन्नाले गजलको प्रथम शेर हो । यसलाई गजलको शीर मानिन्छ । यो अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । अरबी भाषामा यसलाई ‘मतलअ’ भनिन्छ । मतलाको शाव्दिक अर्थ ‘उदय हुनु’ वा ‘आरम्भ हुनु’ भन्ने हो । त्यसैले यसलाई गजलको टाउको पनि मानिएको हो । गजलमा ‘मतला’लाई गजलको प्रतिनिधि शेर पनि भनिन्छ । त्यसैले गजलमा मतलालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको हुन्छ । केहीले यसलाई गजलको परिचय शेरको संज्ञा दिएर अपुरो अर्थ लगाउन पनि खोजेका छन तर यो आफैमा पूर्ण शेर हो । गजलका शेरहरू कहिल्यै पनि अपुरा हुनै सक्दैन । सर्धैं पूर्ण हुन्छन । एउटा गजल ‘मतला’बाट सुरु भएर ‘मकता’मा गएर टुगिंन्छ । मतलाका केही उदाहरण हेरौः –
प्राथमिक कालका गजलहरूमा त्यो कमजारी देखिएको ललिजन रावलले प्रतिनिधि नेपाली गजलहरू भाग- ५ मा उल्लेख गरेका छन । ती गजलहरू सारमा मात्र नभएर रुपगत हिसावले पनि अति नै कमजोर भएको पनि उनको दावी छ । त्यसो भनेर आजभोलिका गजलहरूमा त्यो दोश छदै छैन भन्ने तर्फ भने उनको आसय होइन र लिनु पनि हुादैन । आजभोली गजलमा पनि त्यो दोश प्रसस्त मात्रमा देख्न सकिन्छ । गजलका नाममा फजलको सिर्जना भैरहेका छन । ती सवै कुरा काफियाको मर्मलाई नवुझ्दा भएका हुन । काफियाका केही उदाहरण हेरौः –
-क) पूर्ण काफियाः पूर्ण शब्दको प्रयोग भएका अर्थात स्वर र व्यञ्जनका आधारमा श्रुतिसमान शब्दलाई पूर्ण काफिया हुन । जस्तै गर्न, तर्न, मर्न, र्झन, भर्न, छर्न । त्यस्तै पिएकी, जिएकी, लिएकी, सिएकी आदि । पराई, तराई, मराई आदि । पूर्ण काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौंः –
आंशिक काफियाः पूर्ण रुपमा नभै त्यस शब्दमा केही वर्ण मात्रै काफियाको रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन । जस्तै कहानी, सिरानी, निशानी, दिवानी, जिन्दगानी, रानी आदि । आंशिक काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौं –
यसमा स्वर र व्यञ्जनको ध्वनी समान भएका पद वा बाक्यको काफियाका रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन । जस्तै गर्छ यो, भयो, गयो, छन त, भन त आदि । मिलित काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौं –
प्रयोगको आधारमा गजललाई ‘मुरद्दफ’ र ‘गैरमुरद्दफ’ गरी दुई भागमा बााडिएको पाइन्छ । मुद्दरफ भन्नाले रदिफ प्रयोग गरिएको र गैरमुद्दरफ भन्नाले रदिफ प्रयोग नभएको गजल भन्ने अर्थ जनाउाछ । हुन त रदिफ विना पनि गजलको सिर्जना गर्न सकिन्छ । विना रदिफ लेखिएका गजलहरू पनि नेपाली गजलमा प्रशस्तै भेटिन्छन । केहीले यसलाई अनिवार्य तत्वको रुपमा नलिइ ऐक्षिक तत्वका रुपमा पनि उल्लेख गेरेका छन । रदिफ शब्दले ‘घोडसवारको पछि वस्ने मानिस’ भन्ने अर्थ जनाउछ । घोडा चलाउन पछाडिको मानिसको आवस्यक्ता पर्दैन । अर्थात उसको अभावमा पनि घोडा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लिएरै रदिफको प्रयोगलाई ऐक्षिक मानेका हुन सक्छन । तर यस्को प्रयोगले गजललाई झनै सुन्दर वनाउछ । अझ यसरी पनि भनौ न घोडासवार पछि अर्को मानिस पनि छ भने संभावित खतराबाट जोगाउाछ । लड्न दिदैन । त्यसैले यसको प्रयोगलाई महत्व दिइएको हो । केहीले यसलाई अनिवार्य तत्वको रुपमा पनि लिने गरेका छन । रदिफ प्रयोग भएका र रदिफप्रयोग नभएका केही शेरहरू हेरौः –
अरबी भाषाको ‘मक्तूअ’बाट विकसित हुदै ‘मकता’ वा ‘मक्ता’ भएको हो । गजलको अन्तिम शेरलाई मकता भनिन्छ । यसलाई गजलको टुङ्ग्याउनी पनि भनिन्छ । केहीले ‘तखल्लुस’ प्रयोग भएको छ भने मात्र मकता हुने नत्र मिसरा नै मान्नु पर्ने मत पनि अघि सारेका छन । तर मतलालाई गजलको आरम्भ वा थालनी मानिसके पछि अव मकतालाई गजलको अन्त्य भाग मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । चाहे त्यहा तखल्लुस प्रयोग गरिएको होस् या नहोस । किन भने तखल्लुसलाई अनिवार्य तत्व मानिएको छैन । तखल्लुस राख्ने वा नराख्ने त्यो लेखकमै भर पर्ने कुरो हो । तखल्लुस प्रयोग नभएको शेरलाई मकता नमाने मिसरा मात्रै मान्ने हो भने त्यो गजलको अन्त्य कहिल्यै हुने ? के तखल्लुस प्रयोग नभएको गजलको अन्त्य नै हुादैन त ? तसर्थ विना संकोच गजलको अन्तिम शेरलाई मकता भन्नु नै उपयुक्त हुन जान्छ । मकताका केही शेरहरू हेरौः –
एडिक्टरः म कि साहित्य ?